Sideed ruux oo isku qoys ahaa oo lagu dilay Gobolka Ohio – STAR FM SOMALIA
Ugu yaraan sideed ruux oo isku qoys ahaa ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday afar goobood oo ku taala miyiga Gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Dadka la dilay oo isku qoys ahaa ayaa todobo ka mid ah ay ahaayeen dad waa weyn, halka qof kale uu ahaa wiil dhalinyaro 16 jir ahaa.
Illaa saddex caruur oo ka mid ahaa qoyskan la laayay ayaa ka bad baaday toogashadan, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha.
Saraakiisha Ammaanka ayaa sheegaya in dhamaan dadkan la dilay, waxaana baxsaday dadkii ka dambeeyay, kuwaasoo lagu daba jiro.
Howl galo lagu baadiboobayo kooxihii falkaas geystay ayaa ka socda goobo ku dhow dhow halka fal dambiyeedka ka dhacay oo lagu magacaabo Piketon oo ku taal koofurta Columbus
Magaalooyinka ku yaala Mareykanka ayaa horay uga dhacay dilal noocyo kala duwan oo ay geysteen dad kala duwan.